बिरालोको ७ जीवन हुन्छ - यो भनाइको कारण | बेजिया
सुसाना Godoy | 15/06/2022 16:00 | Mascotas
किन बिरालोको सधैं ७ जीवन हुन्छ भनिन्छ ? सायद तपाइँ यो विवरण हुनुहुन्छ तर तपाइँ किन यस्तो वाक्यांश हो भनेर सोच्नुहुनेछ। ठीक छ, आज हाम्रो लागि पर्खिरहेका ती शंकाहरू समाधान गर्न सक्षम हुने समय हो। किनकि तिनीहरू सधैं खातामा लिनको लागि जिज्ञासाहरू छन् र यदि तपाईं एक वा धेरै बिरालोहरूसँग बस्नुहुन्छ भने, तपाईं जवाफ जान्न अझ बढी रुचि राख्नुहुनेछ।
बिरालाहरू सधैं इतिहास भर सकारात्मक चीजहरूसँग सम्बन्धित छन्। सायद यही कारणले गर्दा तिनीहरू वरिपरि सधैं धेरै जिज्ञासाहरू छन्। तसर्थ, हामीले ती सात जीवनहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नु अचम्मको कुरा होइन जुन हामीले उनीहरूको बारेमा सोच्दा हामीले धेरै उल्लेख गरेका छौं। पत्ता लगाउनू!
1 आफ्नो शारीरिक क्षमता
2 मध्य युगमा किंवदन्तीहरू
3 जादुई संख्या
4 उनको पुनर्जन्म
आफ्नो शारीरिक क्षमता
बिरालोको शारीरिक क्षमताका कारण ७ वटा जीवन भएको बताइएको छ । अर्थात्, यसले उनीहरूलाई कुनै पनि रोगबाट मुक्त बनाउँदैन, तर उनीहरूको शारीरिक क्षमताका कारण उनीहरू चोट नलिई उचाइबाट खस्न सक्छन्। त्यो कुरा जुन हामीले सधैं बिरालाहरू तिनीहरूको खुट्टामा अवतरण गर्ने बारे सुन्छौं हामीले उल्लेख गरेको कुराको पर्यायवाची हो। यो होइन कि तिनीहरू वास्तवमा आफ्नो खुट्टामा खस्छन्, तर जब तिनीहरू लड्छन् तिनीहरू अन्य प्रजातिहरू जस्तै सजिलै चोट लाग्दैन। हल्का तौल हुनुको अतिरिक्त, यो उल्लेख गर्नुपर्छ तिनीहरूसँग सबैभन्दा लचिलो मेरुदण्ड र ठूलो सन्तुलन छ। जब तिनीहरू खस्छन्, तिनीहरूले आफ्नो पछाडि एक प्रकारको आर्क बनाउँछन्, जसले यसलाई प्यारासुट जस्तै काम गर्दछ। अब हामी तपाईंको खुट्टामा अवतरण र चोट नलिने बारे थोरै बुझ्छौं।
मध्य युगमा किंवदन्तीहरू
यो सत्य हो कि बिरालोहरू सधैं सबै प्रकारका किंवदंतियोंमा संलग्न छन्। तर मध्य युगमा तिनीहरू सधैं मन्त्रको भाग थिए। यद्यपि तिनीहरू चाहँदैनन्, तिनीहरू सधैं तिनीहरूको नजिक हुन, साथसाथै जादूगर वा बोक्सीहरूले घेरिएका थिए। सायद तिनीहरूको जिज्ञासु अर्थको कारणले गर्दा। तर जस्तोसुकै होस्, सतावटको बावजुद तिनीहरू सधैं उपस्थित थिए जस्तो देखिन्छ। त्यसोभए तिनीहरू जादुई हुन सक्छन् भन्ने विचार लिइएको थियो। जबदेखि बोक्सीहरू पक्राउ परेका थिए, जनावरहरूले पनि यस्तै नियति भोगेका थिए। तर सबैजनाले एउटै विचार नगरेकोले, उनीहरूलाई स्वागत गर्नेहरू धेरै थिए।
हामीले माथि उल्लेख गरेका कुराहरू बाहेक, नम्बर7यसमा थपिएको छ। कुनै पनि चीज भन्दा बढी किनभने तिनीहरू पवित्र भन्दा बढी जनावर मानिन्थ्यो, यसलाई एक संख्यासँग सम्बन्धित जस्तो केहि छैन जुन जादुई थियो। हो, यदि तपाईलाई थाहा थिएन भने यो नम्बर7हो जसले राम्रो भाग्यलाई आकर्षित गर्दछ। सधैं जादू संग सम्बन्धित हुनुको अतिरिक्त। तसर्थ, जनावरहरूको लागि यो मिलन। तर सावधान रहनुहोस्, किनभने केही देशहरूमा तिनीहरूको7जीवन मानिन्छ। एंग्लो-स्याक्सन देशहरूमा यो भनिन्छ कि यसमा9छ, किनभने यो भगवान राको इतिहासको प्रतीक हो। जसले बिरालोको रूपमा अण्डरवर्ल्डको यात्रा गरे र सबै देवताहरूबाट जीवन लिए। टर्कीहरूको लागि, बिरालाहरूको जीवन एक कम छ। त्यसोभए, यो प्रत्येक स्थानको विश्वासमा निर्भर हुनेछ।
हामीले पहिले नै देखेका छौं कि बिरालोहरू सधैं जादुई संसारहरू र सबैभन्दा उत्कृष्ट कथाहरू र कथाहरूसँग जोडिएका छन्। यस कारणले गर्दा, इजिप्टियन संस्कृतिमा जनावरहरूको पुनर्जन्मको बारेमा पनि सोचिएको थियो। तेसैले बिरालोहरू सातौं पुनर्जन्ममा पुगेपछि मानव रूपमा फर्किनेछन्। त्यसैले, यो सबै थाहा छ, यो बुझ्न सजिलो छ किन बिरालो7जीवन छ। निस्सन्देह, यो सबै पछाडि छोडिएको छ र तिनीहरूसँग साँच्चै मात्र एक जीवन छ। एउटा जसको हामीले ख्याल राख्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सबै भन्दा राम्रो दिनु पर्छ ताकि तिनीहरूले यसको पूर्ण आनन्द लिन सकून्। त्यसैले, याद गर्नुहोस् कि सुरक्षा उपायहरू सधैं आफ्नो घरमा हुनुपर्छ। भाग्य प्रलोभन नगरौं!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » Mascotas » किन भन्छन् बिरालोको ७ जीवन हुन्छ ?
भुइँमा खैरो कपाल लुकाउने चरणहरू